Tapha Chaampiyans Liigii galgalaa Chalsii fi Muunik hinmilkoofne
Finfinnee: Guraandhala 11, 2007 (Oromiya) Morkii Chaampiyans Liigii kaleessa galgalaa qaphxii wal-qixaan goolabamaniiru.
Dirreesaan ala PSG’n kan morkate Chalsiin 1 fi 1’n qixa adda ba’eera.
Goolota kanneen Chalsiif – Biraanslaav Ivaanovich; ‘PSG’iif ammoo - Idiisan Kaavaanii galmeessaniiru.
Dadabiit bor gara biyyaatti akka hindeebine haalli qilleensaa gufuu itti ta’e
Finfinnee: Guraadhala 10, 2007 (Oromiya) Waancaa Konfedareeshinii Afriikaaf gara Siisheelsitti imaluun Koot Di’ooriin 3 fi 2’n kan moo’ate Dadabiit bor sa’a 6’tti Finfinnee akka galutti eegamaa ture.
Haata’u malee, xiyyaarri Siishalsii gara Keeniyaatti as qajeele haala qilleensaa hamaan gara Siisheelsitti waan achi deebi’eef garichi bor hafuunsaa beekameera.
Simpooziyeemiin hundeeffama Adda Bilisa baasaa ummata Tigraay waggaa 40ffaa sababeefachuun magaalaa Maqaleetti baname.
[Oromiyaa 09 06 2007] Simpooziyeemiin hundeeffama Adda Bilisa baasaa ummata Tigraay waggaa 40ffaa sababeefachuun magaalaa Maqaleetti baname. Simpooziyeemi kanarratti qabsaa'ooni durii, Ambaassaddar Siyuum Masfiin fi Obbo Abbaay Tsahayee waraqaa qorannoo dhiyyeessanii jiru. Ambaasaaddar Siyuum Masfiin mata duree " Sochii barattoota hanga yaa'ii tokkoffa Adda bilisa baasaa ummataa Tigraay" jedhutu kan dhiyeessan yoo ta'u sochiin kun qaama sochii Paan Afrikaa keessa akka tokkotti fudhatamu danda'a jedhan.
Shaampiyoonaan Ispoortii manneen barnoota Oromiyaa iftaan irraa eegalee magaalaa Jimmaatti ni dorgomama.
Monday, 16 February 2015 13:38
[Oromiyaa 06 06 2007] Shaampiyoonaan Ispoortii manneen barnoota Oromiyaa iftaan irraa eegalee magaalaa Jimmaatti ni dorgomama. Dorgommii kanarratti godinaalee 18 fi Bulchiinsa magaalotaa 12'n irraa barattoonni kumni 5 caalaan ni hirmaatu jedhame. Shaampiyoonaan kun milkaa'inaan eegalalame bifa baay'ee bareeduun akka xummuramuuf qophii barbaachisu hunda xummuruu bulchiinsi magaalaa Jimmaa beeksise.
Kaampaaniin maqaa Abbabaa Biqilaa fayyadamuun kophee oomishe himatame
Friday, 13 February 2015 13:34
Finfinnee: Guraandhala 05, 2007 (Oromiyaa) Ilmi Atleetii Abbabaa Biqilaa - Tafarii Abbabaa kaampaanii maqaa abbaa isaa fayyadamee kophee oomishe gabaaf dhiheesse himachuusaa himame.
Kaampaaniin Itaalii Vaayibraam bara Faranjootaa 2010 jalqabee eyyama maatiisaa ala moggaasa Biqilaa jedhamuun kophicha oomishee gabaaf dhiyeessuun sirrii miti anis kanaafan himadhe jechuun ilmisaa kun dubbateera.
Ameerikaa kan jiraatu Tafarii Abbabaa deeyilii Meel waliin turtii wayita qabaatetti akka jedhetti, kaampaanichi maqaa abbaasaa fayyadamee kophee oomishe gabaaf dhiyeessuunsaa kan jaallatamu ta’ee, maatiisaa dagachuun garuu sirrii miti jedheera.
Dhaabbatichi maatii Abbabaa waan hinmari’achiifneef maatiinsaa bu’aa argamurraa kan hinqooddane ta’uudha Tafariin kan ibse.
Pireezdaantiin kaampaanichaas gaaffii Tafariin kaase sirriidha. Maatii Abbabaa waliin walitti siqnee hojjennee bu’aa akka qooddatan gochuu dhiisuu keenyaaf dhiifama gaaffanna jedhaniiru.
Itiyoophiyaan sadarkaa kubbaa miilaa 7 fooyyessite
Qiddus Giyoorgis garee Aljeeriyaa El Ulmaan waliin sanbat-duraa dhufu nimorkata
Torbe Kana 48068
Ji'a Kana 91909
01/05/07 irraa eggalee 7194778